TSY MISY IDIRAN’NY ZANDRIKELY NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC – MyDago.com aime Madagascar
TSY MISY IDIRAN’NY ZANDRIKELY NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Manomboka mafampana ny raharaha eto amin’ny firenena hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka. Izy moa anisan’ireo Ct tsy nanatrika ny lanonana nokarakarain’ny Tim Antananarivo Renivohitra teny Ambohimalaza fa nijanona teny an-kianja. Ny naha mafampana azy hoy izy dia nanomboka tamin’ny tenin’ny filoha Ravalomanana Marc hoe tsy hilatsaka hofidiana, ary teo no nampikorapaka ny teny Ambohitsorohitra. Nisy feo aza tato ato hoe tsy ho ela dia hotonga ny filoha Ravalomanana Marc ka vao maika nampikorapaka azy ireo. Mila mivonona mandrakariva isika hoy Mamitiana sao isika eto an-kianja indray no tsy mahare vaovao. Mandeha haingana dia haingana hoy izy ny fifampidinihana misy ankehitriny ary tonga any amin’ny Sadc izay fifampidinihana avo lenta izay. Mahatoky ny Sadc isika hoy Mamitiana ary mahatoky an’i Dada ihany koa. Mikasika ny tondrozotra dia nambarany fa mitady ho kaikerin’ny amboa kely tiany ingahy Beriziky. Ny ankolafy Zafy hoy izy efa nilaza fa avoahy ny gadra politika, sokafy ny radio. Noho izany raha tena manana fahefana marina ianao dia sokafy ny radio ary tanteraho ihany koa ny fitsinjarana ara-drariny ny haino aman-jerim-panjakana fa tsy ho an’olontokana. Tsy misy demokrasia vanona eto hoy ziy raha ireo fototra ireo no tsy avela hahalalaka. Amin’izao fety izao hoy Mamitiana dia jereonao andriamato Beriziky ireo gadra politika ireo. Momba ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc dia nambarany fa mazava ny resaka. Tsy misy idiran’ny zandrikely izany fa tsy maintsy mody izy. Tsy hoe voalazan’ny tondrozotra ihany fa efa neken’ny iraisam-pirenena ary ny vahoaka an-tapitrisa no mitaky ny fodiany eto an-tanindrazany. Ny filoha Ravalomanana Marc hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity dia tsy manana sazy tahaka ireo 109 nahazo izany. Mino izahay hoy izy fa ampiharin’ny fikambanana iraisam-pirenena izay sazy izay ary izy no tsy afaka hofidiana fa nanongam-panjakana.Ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy dia mody tahaka ny filoham-pirenena rehetra satria tsy misy sazy izy. Tsenaintsika amin’ny fomba manetriketrika izy ary izya no mampihorohoro ny ao Ambohitsorohitra. Mikasika ny resaka hoe fialana ao amin’ny système dia nanambara i Mamitiana fa misy mitady hanao fifidianana an’olontokana ary tsy manaiky ny hodian’ny filoha Ravalomanana Marc eto. Izy efa niteny hoy izy fa tsy hilatsaka kanefa mbola atahorana ihany. Manao ratsy matoa matahotra ary mbola ho tsaraina eto iza no nanao ny 26 janoary, Ireny vono olona rehetra teto ireny. Raha dinihana hoy Mmaitiana ireny dia mbola misy ny ampamoaka goavana. Miomana isika hoy izy fa tsy fotoanan’ny hoe hanao action izao. Vonona ve isika hamerina ny 21 janoary ary asehontsika fa ny Malagasy rehetra dia ho tonga eto Antananarivo hitsena azy.
RAVELONANOSY MAMITIANA TSY MAINTSY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO HAMAHA NY KRIZY
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 décembre 2012 Catégories Politique
12 pensées sur “TSY MISY IDIRAN’NY ZANDRIKELY NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC”
28 décembre 2012 à 17 h 09 min
Lasa nanao vakansy any amin´ny toerana tsy misy internet angaha ry kintana sy ranabavy ranavalona fa tsy henoheno eto htramin´ny krisimasy.
manaova fety sambatra ary e! Aza hadino ny mitondra voandalana ho anay mpiandry tranokala eto.
Ho tratry ny farany sy ny taona vaovaoa 2013 indray ary e!
28 décembre 2012 à 19 h 12 min
Aza malahelo ianao ry Misajaona, fa eo ny fakan-drivotra ary eo koa ny fanomezan-tanana amin’ny fanamboarana ny valizin’Ingahy Filoha hajaina ê !
Manaraka an’izay resaka hifanaovanareo ato ihany izahay na dia lavitra aza, fa saingy ny fotoana no tsy misy firy !
Aza asiana sira izay wa wa wa-n’i zanak’i Radivonkiva, izay tsy iza fa taranak’i Razafindiky ato ! Tsipakin’ny mial’aina ny azy !
Na dia eo aza ny tolona tsy maintsy atrehana, mirary fahombiazana sy fety sambatra ho an’ny mpiaro ny ara-dalàna rehetra ! Kanefa na dia izany aza, aza adino ny asa goavana miandry antsika ato ho ato, anisan’izany ny « fandiovana ny Firenena » !
Ilay dimy ho an’ny lehilahy, ary bizou kely ho an’ny vahivavy !! 2013, dia ho rivotra vaovao, fa tsy ho fofom-patsa na fofom-poza intsony na dia eo aza ireo mankafia an’izany !! MDR !!
HIVERINA TSY HO ELA Ê !
28 décembre 2012 à 20 h 27 min
Misaotra betsaka Kintana,ny manohana ny ara-dalàna sy ny zanak’i Dada (misy mahasamihafa azy ihany mantsy ireo ndray² nefa tena afa-miaraka mihitsy raha mahitsy fo) d mirary anao koa ho tahian’ Andriamanitra, ary hahomby @ zavatra rehetra hatao, ary ao anatin’izany ny tolona hiaraha-manana, ary ho an’ny manohana ny ara-dalàna sy ny zanak’i Dada rehetra ihany koa izany. Asa goavana tokoa ny miandry antsika araka ity http://www.dailymotion.com/video/x85lwi_ravalomanana-reuni-1-500-000-person_news#.UN3kfVtjbFw ; mbola mila mampitombo an’io aza isika ka aleo miray hina, manambatra hery, manafosafo ny efa antsika ato anatiny, nefa manambitamby izay te ho namana ihany koa hiditra. FA HITSENA AN’I DADA ISIKA NO SADY HIOMANA AMIN’NY FIAROVANA AZY. Asa goavana mila hiomanana dieny izao izany, hampitaina amin’ny mpiara-mitolona rehetra.
29 décembre 2012 à 2 h 14 min
Irina ho tafody aingana ny Filoha RAVALO%ANANA MARC arymino aho fa hanao valandresaka amin ‘ireo mpomba azy izy izay miray ao amin’ny A,kolafy RAVALOMANANA MARC !
Io no tanjona maika ho Antsika Rehetra miaraka ,miaraka tami’ny Filoha !
Tsy hilaina ny mpanelanelana amin’ny iloha sy ny Mpomba a azy !
29 décembre 2012 à 4 h 16 min
Misatra dit :
29 décembre 2012 à 4 h 52 min
Volana sisa no isaina dé ho afaka hanamafy indray ny safidiny ny vahoaka Malagasy. Manaiky aho fa tsy fifidianana no nametrahaha ny mpitondra ankehitriny fa zany na tsy zany efa nampiseho tam fomba bdb ny vahoaka fa manohana ny Filoha Rajoelina. Izy rahateo tsy niraviravy tanana na niafina tao amabdiky ny krizy fa niasa araka zé moyens teo ampelantanany, dé hoavy tsy ho ela ny fotoana hanamafisana ny fifampitokisana eo aminy sy ny vahoaka
TSY LAITRAN ELAHY HOA iRAJOELINA ,Omega seza CT. Kely hoy ao ELAHY dia miwawa tahaka dada ELAHY fa tsy makaiza rI Mamy.
29 décembre 2012 à 8 h 18 min
Raha izao voalaza izao dia ekena ary tohanana mihitsy. tadidio fa ny fanohanana dia ny fanaovana izay tandrify azy avy . Misy ny mahavita be misy ny mahavita izay vitany. Miandry ny fanantaterahana ireo voalazao ireo izany isika toy ny hoe:
Mila mivonona mandrakariva isika hoy Mamitiana sao isika eto an-kianja indray no tsy mahare vaovao.
– Ny ankolafy Zafy hoy izy efa nilaza fa avoahy ny gadra politika, sokafy ny radio.
– Tsy misy demokrasia vanona eto hoy ziy raha ireo fototra ireo no tsy avela hahalalaka.
– jereonao andriamato Beriziky ireo gadra politika ireo.
– Momba ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc Tsy misy idiran’ny zandrikely izany fa tsy maintsy mody izy.
– ampiharin’ny fikambanana iraisam-pirenena izay sazy izay ary izy no tsy afaka hofidiana fa nanongam-panjakana.
– Tsenaintsika amin’ny fomba manetriketrika izy ary izya no mampihorohoro ny ao Ambohitsorohitra.
– mbola misy ny ampamoaka goavana.
– Vonona ve isika hamerina ny 21 janoary ary asehontsika fa ny Malagasy rehetra dia ho tonga eto Antananarivo hitsena azy.
Ekena daholo ireo fa ity kosa dia tena toerina : »Miomana isika hoy izy fa tsy fotoanan’ny hoe hanao action izao » ka inona ary no atao, hiandry ny …tsy holatsa sa hisy mana avy any an-danitra ?
29 décembre 2012 à 18 h 32 min
Dia tena mihisatra tokoa anie izany hoza-mason’i Misatra izany ha tara be vao mahita zavatra e. Dia efa hita izao ve fa tay dia mbola hitsahana foana?
31 décembre 2012 à 6 h 19 min
foza avy aizaty Miatra ty fa tena karazan’lé tena mihosom-potaka sy masiso mintsy an! mety tsy ho fotaka tsony ny ati-dohany fa tena diky mintsy!
31 décembre 2012 à 6 h 20 min
Misatra no tiako holazaina an!
4 janvier 2013 à 9 h 38 min
ny be Kintana no fototr’ ny korotana eto ambon tany , d lazao fa ts ay ku zany , zay d mafehy zvtr bdbd !!!
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMITIANA : MANOHANA NY HEVITRY NY FFKM ISIKA
Suivant Article suivant : Miandry an’i Dada ny antoko TIM